[OFISIALY] dr.fone - iOS Full Data gaoma: Hamafa iPhone tanteraka & tanteraka
dr.fone Toolkit - iOS Full Data gaoma
Fafao mora foana Data rehetra avy ny Device
Simple, tsindrio-amin'ny alalan'ny, dingana.
Ny tahirin-kevitra dia voafafa tanteraka.
Tsy misy afaka mandrakizay sitrana sy hijery manokana ny tahirin-kevitra.
Mivarotra na manome ny Device?
Ampiasao ity Full iOS Data gaoma hanadio avy ny angona manokana aloha.
Hamafa iPhone: Arovy ny fiainanao manokana amin'ny maha halatra
Misy maro ny fomba ny mamantatra taloha nampiasa angona avy amin'ny iPhone / iPad, ary ny 1 isaky ny 10 no niharan'ny halatra maha eto amin'izao tontolo izao. Mikosoka ny taloha iPhone / iPad dia tsy maintsy mba hiarovana ny tenanao.
Hamafa iPhone: hamafa ny iPhone amin'ny fomba tsara
General iPhone / iPad resetting Tsy ampy. Mba hamafa ny iPhone tanteraka sy mandrakizay, dia mila mamaly ny matihanina-antoko fahatelo fitaovana.
Hamafa iPhone: Iza no mila mamafa ny taloha iPhone / iPad?
Raha efa niditra ny banky vaovao, ID isa, resaka saro-pady, ary ny hafa toy izany ny vaovao manokana, dia mila mamafa ny taloha iPhone / iPad eo anatrehanao mivarotra na manome koa izy.
Hamafa iPhone: hamafa rehetra iPhone, iPad sy iPod mikasika
Na inona na ianao mampiasa ny farany iPhone 7, iPad Pro, na ny taloha 4 iPhone, iPad 1, io antontan-kevitra iPhone wiper dia mifanaraka tanteraka amin'ny rehetra ohatra ny iPhone, iPad sy iPod mikasika ..
Ity tahirin-kevitra iPhone dia tanteraka wiper namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Hamafa maharitra Data avy amin'ny rehetra ny iPhone na iPad
Ny tahirin-kevitra hamafa ianao ho eo intsony mandrakizay. Tsy misy olona, ​​na dia ny maha matihanina mpangalatra, dia mbola ho afaka indray izany.
Simple, fifadian-kanina, ary mahomby.
Ny tahirin-kevitra azo antoka.
Tsindrio fotsiny "hamafa".
Voafafa antontan-kevitra dia tsy azo sitrana misy fitaovana.
Rehetra modely ny iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, iPad
iPod mikasika 5, iPod mikasika 4
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, na 10.6
1GHz (32 bit na 64 bit)
MB 256 na mihoatra ny RAM (1024MB Recommended)
Hard kapila Space
200 MB sy ambony toerana maimaim-poana
iOS 10.3, iOS 10, iOS 9 sy teo aloha
Exellent sy beautifull sy tena importaint fandaharana.
Voavonjy ny andro. Mendrika ny lanjan'ny volamena. Misaotra anao.
Ny tsy maintsy raha toa ka efa very antontan-kevitra!
Perfect miasa vokatra lehibe ho an'ny iPhone.
Ahoana no tanteraka ny format iPhone
Ny fomba maharitra Delete mailaka avy iPad
Ny fomba maharitra Delete hafatra an-tsoratra avy amin'ny iPhone
Ahoana no mba hamafa Content sy Settings rehetra ao amin'ny iPhone
Fafao tanteraka ny fomba rehetra Content Alohan'ny Mivarotra ny iPad
Fafao tanteraka ny fomba Call History amin'ny iPhone
Full Torolalana ho an'ny Hamafa ny iPhone
Ahoana no hamafa / Clear Messages amin'ny iPhone
Ahoana no hamafa History amin'ny iPhone
Ny mpampiasa ihany koa ny Fitrohana:
Fix rafitra iOS olana toy ny tsy misy farany fomba sitrana, lamba mainty, looping, sns
Andramo Tsy Free Andramo Izany Free
Sitrana very na voafafa fifandraisana, hafatra, sary, na antontan-taratasy hafa avy amin'ny iPhone, iPad, iPod mikasika na.
WhatsApp Transfer, Backup & Avereno
Pirenena ny WhatsApp hafatra ho an'ny iPhone, iPad, iPod mikasika, fitaovana Android, na ordinatera mba hamoronana ny nomaniny ho solon'izay.